Family Businesses Q&A — Balance Professional Services
မိသားစုပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့အရန်
ဒီနေ့တော့ မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောင်းအရာများကို အမေးအဖြေပုံစံလေးနဲ့တင်ပြပါရစေ။
• မေးခွန်း (၁)
မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကျရှုံးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း တွေကဘာတွေလဲ?
(၁) အရည်အချင်း မပြည့်စုံ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းတဲ့ သားသမီးတွေကို ဦးစီးလုပ်ဆောင်စေခြင်း
(၂) လက်ရှိလုပ်ငန်းအား ဦးစီးနေသောမျိုးဆက်(အဖေ၊အဖိုး စသည်)က နောက်တက်လာမဲ့မျိုးဆက် ကိုလွှဲအပ်ဖို့ အချိန်ဆွဲလွန်းခြင်း။
(၃) မွေးချင်းမောင်နှမ များနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါ မသင့်မြတ်ခြင်း ၊ အလုပ်တူတူ မလုပ်နိုင်ခြင်း။
(၄) တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး Communication (ဆက်ဆံရေး) ညံ့ဖျင်းခြင်း
• မေးခွန်း (၂)
ကလေးတွေကို ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပြင်ပရှိလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုမှာ အလုပ်လုပ်စေတာ (ဒါမှမဟုတ်)ကိုယ့်မိသားစု လုပ်ငန်းမှာ အစကတည်းက လုပ်စေတာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ?
အကောင်းဆုံးကတော့ မျိုးဆက်သစ်တွေ(ကလေး)တွေကို ကိုယ့်မိသားစု စီးပွားရေး မဟုတ်ဘဲ အပြင်မှာ အလုပ်လုပ်ခြင်းက Self-Awareness (ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပကတိအတိုင်း သိမြင်ခြင်း) နဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တက်စေရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရပြီးချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုလုပ်ငန်းထဲသို့ မဝင်ခင် အပြင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဝင်လုပ်တာက အတွေ့ အကြုံအပြင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး လိုတဲ့စိတ်တွေ၊ တာဝန်ယူစိတ်တွေ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
• မေးခွန်း (၃)
လုပ်ငန်းတွင်းမှာ မိသားစုအချင်းချင်း အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်လာပီဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းက ဘာလဲ? အဆိုးဆုံးက ဘာလဲ?
မိသားစုလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အငြင်းပွားမှုတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကတော့ အငြင်းပွားမှှုတွေဖြစ်မလာခင် ကြိုတင်သတိထားစောင့်ကြည့်ပြီး ပြဿနာမကြီးခင် မြန်မြန်ဖြေရှင်းတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေးတဲ့ပြဿနာတွေ ကြီးမလာနိုင်အောင်လည်း မိသားစုဝင် အချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လေးစားမှုရှိပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ပြဿနာတွေသေးငယ်နေချိန်မှာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း မပြုလုပ်တာ (ဒါမှမဟုတ်) စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆိုတာ၊ ငြင်းခုံတာ၊ အပြစ်တင်တာတွေ မပြုလုပ်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုအဆက်ဆက် အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ ဒီလိုအခက်အခဲတွေ ပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်းသိမြင်ပြီး ကိုင်တွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်တယ်၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်တဲ့ ကိစ္စများကို အငြင်းပွားမှုတွေမရှိဘဲ ဆွေးနွေးကာအဖြေရှာနိုင်ကြပါတယ်။
• မေးခွန်း (၄)
မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးက သူလုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်တွေအတွက် သူတို့အသိမှတ်ပြုမခံရဘူး၊ တန်ဖိုးထားမခံရဘူးလို့ခံစားနေရရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
ဒါတွေကဖြစ်လေ့ဖြစ်ထများပါတယ်။ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်က အသိမှတ်ပြုမခံရဘူး၊ တန်ဖိုးထားမခံရဘူးလို့ခံစားနေရရင် သူဘယ်လိုခံစားနေရတဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိသားစုဝင်များသာရှိတဲ့ မိသားစုပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်များသည် စိတ်ချလက်ချကိုယ်ဘယ်လိုခံစားနေရကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောသင့်သောနေရာဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် တန်ဖိုးမထားမှုတွေ၊ အသိမှတ်ပြုခြင်းတွေ မရတာဟာ ကိုယ်ကလည်းအပြန်အလှန်ပြုမူနေထိုင်ခြင်း မရှိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်ပါတယ်။
• မေးခွန်း (၅)
မိသားစုဝင်တစ်ဦးနဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ?
အောင်မြင်နေတဲ့ မိသားစုစီးပွားရေးတော်တော်များများက အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်တွေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ ခံစားခွင့်တွေကို အရင်ဆုံးညှိနှိုင်းပါတယ်။ ၆လ တစ်ကြိမ် တစ်ဦးခြင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသလား၊ ဆုတ်ယုတ်သွားသလား ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်တွေ၊ ခံစားခွင့်တွေဆွေးနွေးတာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို သုံးသပ်တာက မိသားစုဝင်မဟုတ်တဲ့သူတစ်ဦးကို လုပ်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ လုပ်ခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
• မေးခွန်း (၆)
မိဘတွေ ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းမှာ အမြဲလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အရာသုံးခုက ဘာတွေလဲ?
(၁) ကိုယ့်သား၊သမီးကို အောက်ခြေကစပြီး အလုပ်ဝင်ခိုင်းပါ။
(၂) သူတို့ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုကြည့်ပြီး တဆင့်ချင်းရာထူးတိုးပေးပါ။
(၃) သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်သာမကဘဲ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတိုင်းကို အမြဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပါ။
• မေးခွန်း (၇)
မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ?
မိသားစု စီးပွားရေးပဲ သေချာမလုပ်လည်း ကိုယ့်ကို အလုပ်မထုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ မိသားစုစီးပွားရေးတွေက တစ်ခါတလေ ခက်ခဲပြီးတော့ အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင် ကြိုးစားပြီး လုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားရပါမယ်။ မိသားစုဝင်တွေ၊ အခြားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်ရပါမယ်။
• မေးခွန်း (၈)
မိသားစုဝင်မဟုတ်ဘဲ အပြင်ကလူတစ်ဦးအနေနဲ့ မိသားစုစီးပွားရေးမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါက ဘာတွေလုပ်သင့်၊ သိထားသင့်တာလဲ?
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ တာဝန်တွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ အာရုံစိုက်ပါ။ မိသားစုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်မသိတဲ့ ၊ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ မိသားစုဆက်ဆံရေးတွေ၊ ပြဿနာတွေ ရှိတတ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားပါ။ တချို့မိသားစုလုပ်ငန်းတွေက မိမိလို အပြင်လူထက်စာရင် မိမိလောက်တော့အရည်အချင်းမရှိသော မိသားစုဝင်များကို ရာထူးတိုးပေးတာ၊ ရာထူးကြီးတွေ ပေးတတ်ကြတယ်ဆိုတာ နားလည်ထားပါ၊ သိထားပါ။
ဒီတော့ မိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အခြေခံပြဿနာလေးတွေ၊ သတိထားသင့်တာလေးတွေအတွက် Idea တစ်ခုခုတော့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
SME, Business AdviceHtet Khaing Hla Soe November 9, 2018 Business Advice, Business Management